परपुरुषसँग अबैध सम्बन्ध राख्नका कारणहरु यस्ता छन्
विवाहित महिलाहरुले आफ्नो पति हुँदाहुँदै परपुरुषसँग किन अवैध सम्बन्ध राख्छन्? यी र यस्ता प्रकारका प्रश्नहरु हाम्रा समाजमा निकै आउने गर्दछन् । कुनै पनि परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने इजाजत हाम्रो संस्कृतिले दिँदैन । तर पनि कतिपय महिलाहरु परपुरुषसँग आकर्षित हुने गरेका पाइन्छन् । यसको कारण फरक-फरक हुनसक्छन् । तर मुख्यतया निम्न कारण नै बढी रहेको पाइन्छ […]
जन्मेको बार अनुसार मानिसको स्वभाव र भाग्य कस्तो हुन्छ, जानी राखौं
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत […]
उल्टो घडी चलाउनुको कारण
उल्टो घडी चलाउनुको कारण के रहेछ ? उल्टो घडी चलाउनुको कारण के रहेछ ? घडी उल्टो दिशामा चल्ने गाउँ भन्ने सुन्दैमा अनौठो लाग्नसक्ला । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको एक गाउँमा उल्टो घडी चल्दछ ।छत्तिसगढस्थित एक आदिवासी गाउँमा घडी विपरीत दिशामा चलाइने गरिएको छ । दुनियाँमा घडी बायाँबाट दायाँतर्फ चल्दछ । तर छत्तिसगढको कोरबास्थित आदिवासी शक्तिपीठसँग […]
यी वस्तुहरु पर्समा राख्ने बानी छ ? छ भने हटाउनुहोस् तुरुन्त नत्र कंगाल बनाउंछ
धेरैजसो हामी आफ्नो पर्समा पैसाको साथै केही अन्य कुराहरु पनि राख्ने गर्छौं । तर धेरैपटक पर्समा राखिने यी वस्तुहरु अशुभ मानिन्छ र हाम्रो सौभाग्यलाई पनि दुर्भाग्यमा परिवर्तन गरेर हामीलाई कंगाल बनाइदिन्छ । आज हामी तपाईंलाई पर्समा कहिले पनि राख्न नहुने वस्तुबारे जानकारी दिँदै छौं । औषधीः पर्समा कहिले पनि औषधी नराख्नुहोस् । वास्तुका अनुसार पर्समा […]
यी राशि भएका पुरुषहरुले पाउँछन् सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी
खासगरी हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन। यसमाथि पनि सबैले सुन्दरतालाई मात्रै जीवनसाथीको मापक नराख्न पनि सक्छन्। यद्यपी, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका पुरुषहरुले सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी पाउने विश्वास गरिन्छ। तुला राशि ज्योतिष शास्त्र अनुसार तुला राशि भएका पुरुष सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् […]
इतिहाससँग जोडिएका सम्भोगको यी रहस्य
कुनै पनि सम्बन्धमा गाढापन र आनन्द अनुभूति आवश्यक हुन्छ । पुरुषहरूले दिनमा कैयन पटक यौन सम्पर्कको आनन्द लिन चाहन्छन् भन्ने भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर महिलाहरू पनि पुरुषले नै जस्तै आनन्द प्राप्त गर्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो रहस्य भने महिला वा पुरुष कसले रति क्रियामा सबैभन्दा बढी आनन्द उठाउँछन्? यो प्रश्नका उत्तर पढेर तपाईलाई पनि […]
धनको संकटवाट मुक्त हुने केहि उपाय, लागु गरेर हेर्नुहोस् एक पटक
प्राय मानिसहरु जहिलेपनि धन अभाव भएको र पैसा बचाउन नसकेको बताएका भेटिन्छन् । तर किन यसरी संकट भइरहेको छ धन? के छ धन बचाउने उपायहरु ? यी र यस्तै समस्याले सताएको छ भने कतै तपाईंले कुनै गल्ती पो गरिरहनुभएको छ कि? यहाँ प्रस्तुत गरिएका मध्ये कुनै गल्ती अनिवार्य गरिरहनुभएको छ जसले देवी लक्ष्मी तपाईसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ […]
कुन बार जन्मिएको मानिसको भविष्य कस्तो हुन्छ ?
मानिसको जन्मेको समय र हुर्केको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन बार र समयमा जन्मेका हुन्, उनीहरुको उक्त साइतले स्वभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । पौराणिक कालदेखि मान्दै आएको ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसमा गुणहरु देखा पर्ने बताईएको छ । त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको […]
११ असार सिड्नी, अष्ट्रेलिया । जङ्गली कुकुर अष्ट्रेलियामा प्रतिदिन दशलाख सरीसृप मारिने गरेका सोमबार सार्वजनिक एक नयाँ अध्ययनले जनाएको छ । यसबाट कैयौँ दुर्लभ सरीसृपका प्रजातीहरूको लोप हुने खतरा निम्तिएको अध्ययनमा छ । अष्ट्रेलियामा यूरोपेली मुलुकबाट आएर बस्ती बसाउने क्रमको थालनीसँगै करिब दुई शताब्दीको समयमा जङ्गली बिरालोका कारण कतिपय दुर्लभ प्रजातिको लोप नै भएको बताउने […]
६ जेठ, चितवन । हात्तीसारका माहुत विनोद चौधरीले त्रित… सिटी बजाए । लक्ष्मण थुचुक्क बस्यो । अर्काे सिटीमा सुत्यो, अर्काे सिटीमा कोल्टे प¥यो । चौथो सिटीमा पेट उचालेर घुँडा टेकेर बस्यो । यसरी बस्दा हौदा कस्न सजिलो हुन्छ । ओई ! लक्ष्मण यता आइज । पर भएको लक्ष्मण खुरुखुरु आयो । अडी ! टक्क अडियो […]
भुगोल सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु
विश्वमा धेरै अनौठा र रोचक प्रसङ्गहरु रहेका छन् तर ती बारेमा धेरै कमले मात्रै जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छौं । आज भुगोलसँग सम्बन्धित केहि रोचक प्रसङ्गहरु संकलन गरिएको छ : अन्टार्टिकामा पानी यति चिसो छ कि त्यहाको पानीमा भएको कुनै पनि चिज सड्ने गल्ने हुँदैन । यदि अन्टार्टिकामा जमेको सबै बर्फ पग्लने हो भने संसारको […]
विश्वका पुरुषहरूको लिंगको औसत लम्बाईहरु
पुरुषको लिंगलाई लिएर विभित्र देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका हुन्छन् । लिंगको आकार र प्रकारको विषयमा पनि विशेष चासो राखेको देखिन्छ । विशेष गरी यौन सन्तुष्टीमा लिंगको आकारले फरक पार्छ भन्ने भ्रम पनि फैलिरहेको पाइन्छ । लिंगको आकारले भने यौन जीवनलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर पनि यसको आकारलाई लिएर बेला बेलामा चर्चा परिचर्चा भने […]
युवतीका के कुराले गर्दा केटाहरु फिदा हुन्छन्
मानिसका विभिन्न इच्छा, आकांक्षाहरु हुन्छ । चाहे कोही बुद्धिजीवी युवक होउन् या सडक छाप, केटीहरुको मामलामा भने प्राय सबै एकै खालका हुन्छन् । जुनसुकै केटाहरुले पनि कुनै न कुनै युवतीलाई मनपराउनु भन्दा पहिले कतिको केहि चिज देख्ने गर्छन् । कुनै केटाले पनि युवतीको कुनै कुरा नदेखी मंपाराएको हुदैनन् । केटाहरुलाई फिदा बनाउने युवतीमा यी कुराहरु: […]
देशहरुका रमाइला तथ्य
इन्डोनेसिया १. विश्वका सबैभन्दा होचा मान्छे इन्डोनेसियाका हुन्छन् । यहाँका महिलाहरुको औसत उचाई ४ फूट १० इन्च हुन्छ । २. विश्वमै तीव्र वन फँडानी इन्डोनेसियामा हुन्छ । ३. सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम इन्डोनेसियामा हुन्छ । सिंगापुर ४. सिंगापुरको आकार मुम्बई सहरको भन्दा पनि थोरै छ । यो विश्वमै सबैभन्दा महँगो सहर हो । ५. यहाँ […]
हाम्रो घर वा डेरामा जहाँ भएपनि ऐना अनिवार्य नै हुन्छ । ऐनाबिना त मानिसको सुन्दरता अधुरो नै रहन्छ भन्दा पनि हुन्छ । तर घरमा ऐना राख्दा जहाँ मिल्यो त्यहीँ राख्नु चाँहि हुँदैन किनभने ऐनाले धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । घरमा सही स्थान र दिशामा राखिएको ऐनाले तपाइँलाई शुभफल समेत दिन सक्छ । बास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा […]
गंगा नदीको पानी निन्जा भाइरसले गर्दा बिग्रिदैन, दुर्गन्ध आउँदैन
गंगा नदीको पानीका विशेषताबारे प्रायः यस्ता कुरा सुन्न पाइन्छ कि गंगाको पानी बिग्रिदैन, त्यसमा किरा पर्दैन, त्यसबाट दुर्गन्ध आउँदैन, आदि इत्यादि। गंगा नदीमा ढल मिसिएका छन्, फोहोर तथा शव फाल्ने गरिएको छ तर पनि त्यसको पानीको प्रभावकारिता जस्ताको त्यस्तै छ। खासमा गंगाको पानी कहिल्यै नबिग्रिनुको कारण भाइरस हो। त्यसमा केही यस्ता भाइरस पाइन्छन् जसले पानीलाई […]
उम्मेदवारहरु भोट माग्न खेतखेतमै , मतदाता दंग !
कात्तिक २१, बागलुङ । आगामी मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाग्लुङमा दलहरु चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका चार सदस्यका लागि दलहरुले आ–आफ्नो पक्षमा मत पार्न चुनावी अभियान थालेका छन् । बाग्लुङमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको कम्युनिष्ट […]
कार्तिक १८ | आफुलाई घुरेर हेरेको भन्दै एक महिलाले एक व्यक्तिलाई आफ्नो स्तनले आक्रमण गरेको विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दक्षिणपूर्वी ब्राजिलको रिबेराओ प्रेतो सिटी सेन्टरमा लिइएको भिडियोमा एक सेल्स उमनले सार्वजनिक रुपमा आफुलाई घुरेको आरोप लगाउँदै आफुले काम गरिरहँदा जथाभाबी छुने र यौन दुर्ब्यबहार गर्ने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएको भन्दै उक्त व्यक्तिलाई लातले हान्दै […]
कात्तिक १७, ढाका । बंगलादेशमा एक रिक्सा चालकले त्यहाँका चर्चित नायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । एउटा फिल्ममा ती नायकले प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बर आफ्नो रहेको भन्दै एक रिक्सा चालकले मुद्दा दायर गरेका हुन् । बंगलादेशका अभिनेता शाकिब खानले एउटा फिल्ममा प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बर रिक्सा चालक इजाजुल मियाँको हो । फिल्ममा उक्त मोबाइल नम्बर […]
तीनहजार वर्षमा एक चोटी फुल्ने फूल
कार्तिक १६ | विश्वभर अनेक मिथक र मान्यताहरु प्रचलनमा रहेका छन् । यस्तै अनौठो मान्यता संसारका केही क्षेत्रमा रहेको छ । जहाँ तीन हजार वर्षमा एकचोटि फुल्ने एउटा फुलको अस्तित्व रहेको विश्वास गरिन्छ । त्यस फूलको संस्कृत नाम उदुम्बरा हो जसको अर्थ हुन्छ स्वर्गको फूल । त्यसो त विगत कैयौं वर्षमा संसारभरि यो फूल देखिएको […]